Nirefodrefotra antoandrobe ny basy: maty voatifitry ny polisin’ny Fip i Talata, jiolahy raindahiny | NewsMada
Nirefodrefotra antoandrobe ny basy: maty voatifitry ny polisin’ny Fip i Talata, jiolahy raindahiny
Nitana ny teny nomeny, araka ny fampitandremana efa nataony tokoa ny mpitandro filaminana ao Toamasina fa tsy hitsitsy manoloana ny firongatry ny asan-jiolahy. Vokany, maty voatifitry ny polisin’ny Fip, omaly antoandro i Talata Zafy, raindahiny amin’ny fanafihana kioska. Voasambotra taorian’izay ny namany iray hafa.
Nirefodrefotra nandritra ny adiny iray ny poa-basy nandritra ny fifampitifirana teo amin’ny jiolahy sy ny polisin’ny Fip notarihin’ny kaomisera Rafaliarivo Jules tao Andranomadio lalam-baovao Toamasina, omaly antoandrobenanahary. Jiolahy miisa telo no nifanehitra tamin’ny polisy ka lavo nandritra ny fifampitifirana ny iray amin’izy ireo, antsoina hoe Talata Zafy Patrick, 26 taona monina ao Ambalarondra, kaominina ambanivohitr’i Fanandrana, distrikan’i Toamasina II. Fantatra fa nikasa hamaky kioska ry zalahy no tonga tampoka ny polisy. Nambaran’ny lehiben’ny Fip fa efa ho herinandro izay no nirongatra ny fanafihana fivarotana sy kioska ao Toamasina ary indroa isan’andro izany. “Nametraka polisy manao fanamiana olon-tsotra fa mihazona basy izahay amin’ireny toerana heverina fa betsaka ahitana kioska amin’ny tambajotram-pifandraisana ary manao fifanakalozana ara-bola ireny”, hoy ny kaomisera Rafaliarivo Jules. Nisy ny loharanom-baovao azo tamin’olon-tsotra nilaza fa misy telo lahy mandeha moto manao taingin-telo mihaodihaody teo amin’ny kioska iray ao Andranomadio Toamasina. Niezaka nanara-maso izany ny polisy akaikin’ilay kioska ka voamarina ny fisian’ireto jiolahy mihaodihaody ireto. Fotoana fohy taorian’izay, voahodidina polisy teny amin’ny manodidina ny toerana misy ireto jiolahy ireto.
Tratra ny naman’i Talata Patrick…
Nitsoaka ny jiolahy nandeha moto raha nitifitra avy hatrany kosa i Talata Zafy Patrick. Raikitra ny fifanjevoana teo satria tsy nanaiky lembenana ireto jiolahy ireto. nihoron-koditra ny mponina tao Andranomadio raha nandre ny poa-basy tsy nifankahitana. “Tsy hamela fotsiny ny asa fampihorohoroana sy ny tsy fandriampahalemana ny polisy fa hitifitra ireo jiolahy mbola manohy ny asa ratsiny”, hoy hatrany ny fanazavan’ny polisy. Taorian’ny nahavoatifitra ity jiolahy ity, maro ireo olona nijoro vavolombelona fa isan’ny nanafika tany amin’izy ireo, toy ny tao Ambalamanasa, Antsiranampasika, Ambolomadinika, Valpinson ireto andian-jiolahy ireto. anisan’ny nahavariana ny olona rehetra ny tsy fisian’ny ra nivoaka teo amin’ny vatan’ity jiolahy lavon’ny Fip ity fa mandranondranoka toy ny menaka no nivoaka teo amin’ny vatany gorobaky ny balan’ny polisy. Fantatra fa voasambotra omaly hariva ihany koa ny iray amin’ireo jiolahy naman’i Talata izay tafaporitsaka niaraka tamin’ny moto. Nambaran’ny polisy hatrany fa tsy maintsy tratra ny naman’ity jiolahy ity.